Marquette Park မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲ။ • Dutchtown, St. Louis, MO
အပေါ် Posted ဧပြီလ 21st, 2021
နွေ ဦး ရာသီမှာကြီးစွာသောအစ Marquette ပန်းခြံ! Dutchtown ၏အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိသောနေရာကိုအနားယူရန်နှင့်အိမ်နီးချင်းများသည်ရာသီဥတုကောင်းမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဖြစ်သည်။ Marquette Park သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွက်မယုံနိုင်စရာကောင်းသောအရာအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ကြာမြင့်စွာကတည်းကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သော်လည်းလုပ်စရာများစွာကျန်ရှိနေသေးသည်။
ဒီတော့ဝေး, ငါတို့ပြီးသား ကန်ဘောဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ၏ထောက်ခံမှုအတွက် Marquette အဝန်းနေ့။ MCD သည်Augustဂုတ်လအတွင်းကပန်းခြံတွင်ဖြစ်ပျက်သောကျောင်း၏နောက်ကျောအခမ်းအနားဖြစ်သည်။ သူတို့ကကျောပိုးအိတ်များ၊ ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများ၊ အ ၀ တ်အစားများ၊ ဆံပင်ညှပ်များနှင့် Dutchtown ကလေးများအားကျောင်းစာသင်ချိန်တွင်ကူညီရန်ကူညီသည်။ ကျနော်တို့အသင်း ၁၆ ဖွဲ့ကိုကွင်းထဲခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးပရိသတ်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကသူတို့ကိုအမြစ်တွယ်စေခဲ့တယ်။ ဒီမှာနောက်ထပ်ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ပါ.
တရားဝင်ပြိုင်ပွဲကိုမတ်လအကုန်ပိုင်းတွင်အစပြုခဲ့သည်။ သို့သော်အပြင်းအထန်လေပြင်းမုန်တိုင်းများကြောင့်တစ်နာရီမိုင် ၃၀ တိုက်ခတ်သောလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကစားရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ဂိမ်းများကိုရွှေ့ဆိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နေဆဲ ပန်းခြံမှာတစ်နေ့တာအရှိဆုံးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အိမ်နီးချင်းများကတေးသံမြည်ခြင်းနှင့်ကင်တောင်ပံများ၊ အုတ်များ၊ ကလေးများနှင့်မိဘများကစားခြင်း၊
ပိုများသောတနင်္ဂနွေ Marquette Park မှာပျော်စရာ
ဤတနင်္ဂနွေနေ့လည်ခင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပျော်စရာများစွာရှိခဲ့ကြပြီး၎င်းကိုပုံမှန်ပြုလုပ်လိုသည်။ မကြာမီလာတော့မည်။ Marquette Park တွင် South Side တနင်္ဂနွေ! အသေးစိတ်များလာရန်မျက်စိကိုထားပါ။
တနင်္ဂနွေများသည် Marquette ပန်းခြံသို့သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ကစားကွင်းနှင့်စိမ်းလန်းသောနေရာတို့ကိုခံစားပါ၊ Liga Latina ဘောလုံးဂိမ်း.
တတိယနှစ်ဆက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ hosting လုပ်လိမ့်မယ်လို့ကြေငြာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ် Marquette ပန်းခြံရှိရုပ်ရှင်ည! ဤအဖြစ်အပျက်များကအိမ်နီးချင်းများကိုအတူတကွပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပန်းခြံကိုပျော်မွေ့ခြင်း၊ ရပ်ရွာလှုပ်ရှားမှုများအကြောင်းလေ့လာခြင်းနှင့်မိသားစုဖော်ရွေသောဖျော်ဖြေမှုအချို့ကိုပြုလုပ်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဒီနွေရာသီမှာပန်းခြံထဲမှာ Movie Nights သုံးခုရှိမယ်။
ကျနော်တို့နောက်ဆုံးနွေရာသီ Movie Night ကိုရေကူးကန်မှာရေငုပ်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်အောင်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီနွေရာသီပြန်ဖွင့်တာကိုမြင်ရလို့ကျွန်တော်တို့အရမ်းပျော်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အလယ်၌ကြီးမားသောအခမဲ့အများပြည်သူရေကန်ရှိခြင်းသည် Dutchtown ရှိကလေးများနှင့်မိသားစုများအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်သည်။
ထိုအခါ Marquette အပန်းဖြေစင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းကလေးတွေများအတွက်နောက်ထပ်ကြီးစွာသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနွေရာသီမှာ Rec Center ကအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မယ် ဘတ်စကက်ဘော၊ လက်ဝှေ့နှင့်အခြားစခန်းများ ကြောင်းအစာရှောင်ခြင်းတက်ဖြည့်နေကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်အထူးသီးသန့်အိမ်နီးချင်းအုပ်စုရှိသည် Marquette ပန်းခြံ၏မဟာမိတ်များ နှင့် Dutchtown တောင်အဝန်းကော်ပိုရေးရှင်းပန်းခြံကိုပြန်လည်ရှင်သန်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားသည်။ အဆိုပါပန်းခြံသည် Dutchtown အတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်အထူထပ်ဆုံး၊ အငယ်ဆုံးနှင့်အဆင်းရဲဆုံးသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း.
Dutchtown South သည် Common Sound Festival ပွဲကိုစက်တင်ဘာလတွင်ကျင်းပသောပန်းခြံတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အနီးအနားရှိကလေးများအားစာဖတ်ခြင်း၏ ၀ မ်းမြောက်မှုကိုဆောင်ကြဉ်းရန်သူတို့ကပုံပြင်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလမ်းလျှောက်ရန်စီစဉ်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ Marquette မှာတိုးတက်မှုများအတွက်ဆက်လက်တွန်းအားပေးအဖြစ် DSCC ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူရှိခဲ့သည်။
Marquette ပန်းခြံ၏မဟာမိတ်များကျင်းပခဲ့သည် 2019 ခုနှစ်တွင်ရန်ပုံငွေရှာ ဒီဟာမဟုတ်ရင်မပြင်ဆင်ရသေးသောရေကူးကန်အတွက်ကုလားထိုင်များနှင့်နားနေခန်းများကိုဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့တယ်။ ဒီနှစ်ရေကူးကန်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အတွက်ပရိဘောဂအသစ်တွေကိုနေရာချဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ AMP သည်အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့် Marquette Park တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းများကိုဆွဲဆောင်ခြင်း၏ရှေ့တန်းမှပါ ၀ င်သည်။
Marquette Park မှာစိန်ခေါ်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Marquette ပန်းခြံနှင့် Dutchtown တစ်လျှောက်လုံး၏အကောင်းမြင်မှုကိုအလေးထားလိုသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည် Marquette တွင်တွေ့မြင်လိုသောလိုအပ်သည့်တိုးတက်မှုများကိုရရန်ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိရန်လိုသည်။ Marquette ပန်းခြံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတားအဆီးများစွာရှိနေသော်လည်းခက်ခဲသောအလုပ်မှတိုးတက်သည်။
Marquette Park ရေကန်သည်ရှည်လျားသောဆူးဝါယာကြိုးများဖြင့်ထိပ်တန်းကွင်းဆက်ချိတ်ထားသည့်ခြံစည်းရိုးတစ်ခုနှင့်ဝိုင်းရံထားသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့ကဆူးဝါယာကြိုးကိုဖြုတ်ချရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်ရံဖန်ရံခါကျူးလွန်မိသောအမှားများကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်မည်မဟုတ်ဘဲ၊ကြောင်းဘာသာရပ်ပေါ်မှာငါတို့စာကိုဖတ်ပါ).
သို့သော် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများနှင့်မိသားစုများကိုထိုကဲ့သို့သောကြမ်းတမ်းသော၊ မနှစ်မြို့ဖွယ်ဝန်းကျင်နှင့်ခြံစည်းရိုးခတ်ထားခြင်းသည်နာယကများကကြိုဆိုခြင်းထက်နည်းသည်ဟူသောသတင်းစကားကိုပြနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေကန်သည်ထောင်ကဲ့သို့မဖြစ်သင့်ပါ။ ကျနော်တို့ကဆူးဝါယာကြိုးကိုင်တွယ်ရန်နောက်တဖန်အကြိမ်ကြိမ်မေးမြန်းနှင့်အနည်းငယ်ပျက်ကွက်ကတိတော်များမှလွဲ။ တုန့်ပြန်အနည်းငယ်သာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ဆူးဝါယာကြိုးနှင့်ရေကူးကန်ပရိဘောဂများမရှိခြင်းအပြင်အ ၀ တ်ခန်းခန်းများနှင့်၎င်းတို့အားပါ ၀ င်သည့် Rec စင်တာများသည်ကြမ်းတမ်းသောပုံသဏ္areာန်ရှိသည်။ အဆောက်အအုံများသည်အဓိကအဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်နိုင်သော်လည်းအခြေခံပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပင်မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
Marquette Park ၏မဟာမိတ်များလည်းရရန်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည် ဘောလုံးအဆောက်အ ဦ များတိုးတက်မှုများ ပန်းခြံမှာ။ Liga Latina၊ လူငယ်ဘောလုံးအသင်းများနှင့်အိမ်နီးချင်းများကဘောလုံးကွင်းကိုဘောလုံးကိုကန်ဖို့နီးကပ်စွာအသုံးပြုသော်လည်းဘောလုံးကွင်းကိုပုံမှန်အသုံးမပြုသော်လည်း၊ ပုပ်နေသောသစ်သားရည်မှန်းချက်များသည်ပိုက်ကွန်များမပါဘဲကွင်းပြင်၏အစွန်အဖျားကိုအမှတ်အသားပြုသည်။ အဆိုပါကစားသမားမကြာခဏလယ်ကွင်း mow နှင့်လိုင်းများသူတို့ကိုယ်သူတို့ဆေးသုတ်ရန်အချိန်မတိုင်မီထွက်လာ၏။
Movie Nights ကြောင့်ဖြစ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ Movie Nights ကိုကြိုတင်စီစဉ်ထားပြီးသောကြောင့်နေထိုင်သူများအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်တွင်ဥယျာဉ်အတွင်း၌ရှိလိမ့်မည်ကိုမြို့ကြီးသို့များစွာသတိပေးသည်။ အမှိုက်ဖယ်ရှားပြီးမြက်ပင်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိုတောင်းဆိုရန်လများ၊ ရက်သတ္တပတ်များနှင့်ရက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ ကြိုတင်၍ တောင်းဆိုထားသည်။ ဤတောင်းဆိုမှုများကိုများသောအားဖြင့်နားမထောင်သွားပါ။
Movie Night မတိုင်မီကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများသည် Field House ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပန်းခြံတစ်လျှောက်စုဆောင်းသောအမှိုက်များကိုကောက်ယူရန်အချိန်ပေးရန်သေချာပါသည်။ အမှိုက်ပုံးများသည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှိုက်ပုံးကိုထုပ်ပြီးအနီးအနားရှိလမ်းကြားအမှိုက်ပုံများသို့ထုတ်ယူရမည်။ ပန်းခြံကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်သေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ငှားရမ်းထားသောအဖွဲ့သည်အရာအားလုံးကိုစနစ်တကျသန့်ရှင်းစေရန်သေချာစေရန်အမှောင်ထဲတွင်ရှိနေသည်။
ငါတို့သည်လည်းဖိတ်ကြား စိန့်လူးဝစ်မြို့တော်ရဲဌာန ရပ်ရွာနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအရာရှိများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ Movie Nights သို့ပေးပို့ရန် - လုံခြုံရေးစိုးရိမ်မှုများကြောင့်မဟုတ်ဘဲရဲများအား၎င်းတို့အစေခံအသိုင်းအဝိုင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အရေးပေးရန်ဖြစ်သည်။ ရဲများရောက်ရှိလာပြီးပန်းခြံအနားသို့ရောက်ရှိလာကြသည်။ သူတို့သည်ကားပေါ်မှမထွက်လာကြပါ။
လှပသော Marquette Park Field House ကိုလွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ သို့သော်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း၏အရည်အသွေးသို့မဟုတ်အခြေခံအဆက်မပြတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အလွန်အမင်းအသုံးမချရဘဲအလျင်အမြန်ပျက်စီးသွားသည်။ ဓာတ်လှေကားများနှင့်လေအေးပေးစက်စနစ်များမအောင်မြင်သောကြောင့် Field House သည်ကျွန်ုပ်တို့ကျင်းပခဲ့သောကြိုက်နှစ်သက်ရာဖြစ်ရပ်များအတွက်လက်လှမ်းမမှီနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးပြီးအငြင်းပွားဖွယ်ရာငှားရမ်းခများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါစေ။
Field House ရှိအိမ်သာများသည်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်ရပ်များအားလုံးတွင်ခရီးဆောင်အိမ်သာများကိုပေးရသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကုန်ကျစရိတ်မှာအမြတ်အစွန်းအနည်းငယ်သာရှိသောအမြတ်အစွန်းမရှိသောဘတ်ဂျက်မှဖြစ်သည်။ (အကယ်၍ မင်းကဒီဘတ်ဂျက်ကိုနောက်ထပ်ထပ်တိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီချင်တယ်ဆိုရင်၊ မင်းဒီမှာလှူနိုင်တယ်.)
Dutchtown တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းရှိသည်။ ၎င်းသည် Marquette Park ကိုအသုံးပြုရန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အိမ်နီးချင်းများနှင့်ရပ်ရွာမှသက်ဆိုင်သူများ၏ခိုင်မာပြီးကြီးထွားလာနေသောကန့်သတ်ချက်များရှိနေပြီးအရင်းအမြစ်များအကန့်အသတ်ဖြင့်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်မိမိတို့၏အချိန်၊ ချွေးနှင့်ရန်ပုံငွေများကိုရှေ့သို့တင်နေသည်။
ဒါပေမယ့်မြို့ပြခေါင်းဆောင်ကဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကို Dutchtown ရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန်နဲ့အရင်းအမြစ်တွေကိုမရင်းနှီးသေးဘူး။ သွားစရာနေရာများစွာလိုချင်တဲ့လူတွေကိုအစေခံနိုင်တယ်။ Marquette Park သည်ပတ် ၀ န်းကျင်အလယ်၌ထိုင်။ မြို့၏အခြားနေရာများထက်တစ်စတုရန်းမိုင်လျှင်လူ ဦး ရေပိုများသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများ၏ ၄၀% နီးပါးသည်အသက် ၁၈ နှစ်အောက်များဖြစ်ကြသည်။ စိန့်လူးဝစ္စအတွက်ပျမ်းမျှအိမ်ထောင်စုဝင်ငွေသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့်နိမ့်သည်။
Dutchtown အိမ်နီးချင်းများသည် Marquette Park တွင်ကြိုဆိုခြင်းနှင့်လုံခြုံမှုခံစားရရန်ထိုက်တန်သည်။ ကျနော်တို့မြက်ဖြတ်, အမှိုက်ထွက်ယူ။ , ဆူးဝါယာကြိုးဖယ်ရှားပစ်ချင်တယ်။ သန့်ရှင်း။ လုံခြုံသည့် Rec Center ကိုလိုချင်သည်။ ကျနော်တို့အိမ်သာလည်ပတ်ချင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်များကဤအရာများကိုခံထိုက်သည်။
၂၀ ရပ်ကွက်ရှိ Alderwoman Cara Spencer နှင့် ၂၅ ရပ်ကွက်ရှိ Alderman Shane Cohn တို့သည် Marquette Park တွင်တိုးတက်မှုအတွက်ထောက်ခံအားပေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်မြို့တော်ပန်းခြံများနှင့်ပတ်သက်သောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အများစုသည်အလုပ်အမှုဆောင်ဌာနခွဲဖြစ်သောမြို့တော်ဝန်နှင့်ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုဘုတ်အဖွဲ့မှဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ။
မြို့တော်ဝန် Tishaura O. Jones ၏ဖွင့်လှစ်မှုနှင့်အတူငါတို့ရှိသည် အယူခံဝင် သူမနှင့် Marquette ပန်းခြံတွင်အသစ်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်မြို့။ ကျနော်တို့မြို့တော်ဝန်ဂျုံးစ်နှင့်သူမ၏အဖွဲ့သည်အတွက်ဆန္ဒရှိများနှင့်တတ်နိုင်မိတ်ဖက်ရှိသည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော Marquette ပန်းခြံတစ်ခုနှင့်ပိုမိုအားကောင်းသည့် Dutchtown ကိုတည်ဆောက်ရန်ကတိကဝတ်ပြုရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ မြို့တော်ဝန်ဂျုံးစ်နှင့်စိန့်လူးဝစ္စစီးတီးသည်နောက်ကွယ်မှအိမ်နီးချင်းကောင်းအုပ်စုတစ်စုရှိသည်။ ကျနော်တို့မကြာခင်သူတို့ကိုဒီမှာကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤအရာကိုဖတ်ရှုနေပြီးသင်သည်မြို့တော်ဝန်ရုံးတွင်မရှိသော်လည်းသင်ကူညီလိုသော်လည်းသင်သည်လုပ်နိုင်သည် တစ်ကြိမ် or လှူဒါန်းမှုတည်တံ့ခိုင်မြဲ ငါတို့အလုပ်ကို Marquette Park နှင့် Dutchtown တစ်လျှောက်လုံးတွင်ကူညီရန်။
အောက်မှာ Filed Marquette ပန်းခြံ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. ဒိန်းမတ် နှင့် Marquette ပန်းခြံ. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဧပြီလ 21st, 2021 .
ဒိန်းမတ် Marquette ပန်းခြံ Marquette Park မှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲ။